China Glass Noodle rụpụta na Factory | Na-emebi
Pottọ Nduku Glass Noodle / Vermicelli
Pottọ Nduku Vermicelli, nke a makwaara dị ka nduku vermicelli na noodles, bụ ọpụrụiche ọdịnala nwere akụkọ ihe mere eme nke ihe karịrị afọ 400. Nri nduku vermicelli adịghị njọ mgbe isi nri ruo ogologo oge. Ọ na-esi isi ma na-atọ ụtọ, nwekwa ụzọ dị iche iche esi eri nri. Ọ bụ ụdị ihe eji eme ihe site na iji poteto dị ụtọ dị ka akụrụngwa ma na-adabere na starch na poteto dị ụtọ. Ọ bara ọgaranya na eriri nri, bara ọgaranya na potassium.
Potato Vermicelli na-atọ ụtọ bụ nri dị mfe. Enwere ike dakọtara ya na ọtụtụ nri ma sie ya n'ọtụtụ ụzọ iji mee nri dị iche iche na anụ oyi na anụ ọkụ na akwụkwọ nri, eghe na steamed.
Zhengwen Brand Sweet Potato Glass Noodle / Vermicelli,100% Pottọ nduku Starch Efrata, Siri ike ka HACCP Management na Control System. Ọ bụ Green, Healthy, adaba na ngwa ngwa nri ndị kwesịrị ekwesị maka ndị mmadụ.
URU ỌR N
Vermicelli bara ọgaranya na carbohydrates, eriri nri, protein, niacin, calcium, magnesium, iron, potassium, phosphorus, sodium na mineral ndị ọzọ;
Vermicelli nwere ezigbo ekpomeekpo, ọ nwere ike ịmị ụtọ ofe dị iche iche na-atọ ụtọ, na vermicelli n'onwe ya dị nro ma dịkwa mma, na-eme ka ọ dị ọhụrụ ma na-atọ ụtọ. Ezigbo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ vermicelli nwere ọtụtụ ọrụ ahụike nke poteto dị ụtọ.
1KG kwa akpa, 20 Akpa kwa Carton
36 Ọnwa site na ụbọchị mmepụta site na ọnọdụ nchekwa akwadoro. Bọchị Mmepụta: Edere na Ala nke Cup.
Nke gara aga: Chongqing oseose utoojoo Vermicelli
Osote: Glass Noodle maka marklọ Ahịa
Nkowa Obere banyere Vermicelli / Instant Glass Noodle
Oseose Glass Glass Noodle Vermicelli, oseose, ọhụrụ, keisi, utoojoo na mmanụ ma kegriiz! Ọ bụ nri na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. A na-agwakọta ntụ ntụ isi site na nduku ụtọ na agwa na oke kachasị mma, ma ndị ọrụ ugbo jiri ọrụ aka ọdịnala mee ya. Spicy Hot Glass Noodle Vermicelli nwekwara ụdị nri dị mma.
Mepee mkpuchi, tinye Vermicelli na sizinin (Ewezuga Mmanya) na iko ma ọ bụ nnukwu efere;
Wunye mmiri esi mmiri ruo akara nịịle mmiri, mechie mkpuchi, ma simmer nkeji ise;
Mepee mkpuchi ahụ, tinye mmanya vaịn wee kpalite nke ọma ma nwee anụrị Vermicelli dị ụtọ.
100% Natural Dehydrated / Mịrị AD Celery ibe
GLUCOSYL STEVIOL GLYCOSIDE usoro GSG 90%
Mala Beef Oseose na utoojoo Vermicelli
Nduku Diced, L - Phenylalanine (PHE), Taurine, Mkpụrụ karọt ntụ, Mịrị Carrots Bulk, Vermicelli,